Mayelana ne-P&M → Umbukiso okhishwe ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu
Igumbi lokuthunga le-P&M lasungulwa ngonyaka we-1995 eRawa Mazowiecka. Kusuka ngo-2003. sinikezela ngezinsizakalo zokuthunga, ukusika, ukusina nokulebula. Siphinde futhi sigqoke izimpahla ezithengisa kakhulu nokukhangisa.
Sinezinto ezahlukahlukene zemikhiqizo - imikhiqizo engaphezu kuka-6000, izingubo zokugqoka kanye nezingubo zokukhangisa ezivela kubakhiqizi abaziwayo emanani entengo amahle kakhulu. Lokhu, phakathi kokunye, amaswidi, izigqoko, izigqoko, amahembe, uboya, amahembe wepolo, amahembe, izigqoko zokusebenzela, ochwepheshe, ezokwelapha, isitolo esibandayo nezingubo zikamahhala, kanye nezinyawo eziningi ..
Ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zokugqoka - kufaka nezingcweti zokugqoka - kuyingxenye yokunikezwa kwethu okuningana. Njengengxenye yokubambisana, amakhasimende ethu nawo athola amathuba okusebenzisa izinsizakalo eziningi ezingeziwe. Siphinde sisebenze ngamandla njengengqungquthela yokuhlanganisa izingane, okungenye yezizathu zethu ezinkulu zokuziqhenya.
Ukugqokwa kwamakhompyutha kuyindlela enhle kakhulu, nenhle futhi eqinile yokumaka izingubo. Sisebenzisa izindawo ezikhethekile zobuchwepheshe, siyakwazi ukwenza noma iyiphi, noma iphethini eqondile kakhulu yanoma iliphi usayizi ezingutsheni zanoma yiluphi usayizi. Ukumbathisa izingubo kuyinqubo edinga ukunemba okungaphezu kokuvamile, kepha umphumela omuhle ngobuhle uyifanele ngokuphelele intengo nomzamo wethu osekelwa ubuchwepheshe bobuchwepheshe.
Senza izinhlelo zokusebenza zokufekethisa cishe kuzo zonke izinhlobo zezingubo (amahembe wepolo, amahembe, izigqoko zomsebenzi, ama-aproni, amathayi, amasaka), futhi ngenxa yokunamathiselwa okukhethekile, siphinde futhi sinikeze nezinsizakalo zokufekethisa emabhokisini - sizokujabulela ukuhlanganyela amaphrojekthi ethu edlule.
Futhi asikhawulelwe uhlobo lwezingubo - ifektri yethu inendawo yokuthunga neyokusika igumbi, ngakho-ke sinokulawula okuphelele kwekhwalithi yalokho esikulungiselela yona. Amathuba anikezwa isitolo sokufakelwa kwamakhompiyutha inzuzo enkulu yenkampani ekhonza imakethe yasePoland yezingubo zomsebenzi nokukhangisa.
Ukufakelwa kwamakhompiyutha kuyalwa yizinkampani ezahlukahlukene - kwezinye kufanele zisebenze njengesithombe, kwabanye - ezokuphromotha. Kodwa-ke, ukugqokwa ngezingubo, ngaphezu kwakho konke, kuyisiqinisekiso sokuqina nesisombululo esihle esibonisa ukusebenza kwekhwalithi ephezulu.
Azikho ii-oda ezinkulu kakhulu noma eziyinkimbinkimbi yeqembu lethu - amaphrojekthi ethu wangaphambilini akhombisa ukuthi ngaphandle kwephrojekthi, siyakwazi ukwenza umsebenzi wethu ngokuthembekile nangesikhathi. Siyakwazi ukukunikeza ukugcwaliseka okusheshayo kwe-oda - umthamo wethu wansuku zonke ufinyelela emifashini engama-3000!
Ukuphrinta kwesikrini kungenye yezinsizakalo esikwazi ukukunikeza zona. Kuyindlela ekhethwe njalo yokumaka izingubo. Ngenkathi kulula kakhulu ama-T-sh-silk-screen, ezinye izinhlobo zezingubo ezifana nama-T-shirts, amashethi, izigqoko, uboya, amahembe, njll kubukeka kukuhle nje. Le nsiza ayigcini ngokuqina kuphela futhi ihlinzeka ngekhwalithi enhle nokuqina, kodwa futhi ikhombisa kahle iphalethi yemibala yomdwebo ngamunye wesithombe futhi inqubo esebenza kahle.
Le teknoloji yokuphrinta isikrini ihlukaniswe yaba: - Ukuphrinta kwesikrini esisodwa kumbala wokugqoka, - ukuphrinta isikrini esinemibala eminingi
Ukuphrinta kwesikrini kuyindlela enhle yokwenza ngezifiso izingubo. Le ndlela, eduzane nokufakelwa kwekhompyutha, ingenye yokuqina nokubonisa okuhle kakhulu imibala ye-oda lekhasimende. Ngenxa yalokhu, kungakhathalekile usayizi nokuklama, i-oda lakho lizoba lekhwalithi ephezulu kakhulu yokuphrinta kwesikrini ezingutsheni (isb. Kumahembe wepolo noma amahembe.
Ngenxa yobuchwepheshe bayo obusezingeni eliphezulu nokunemba, namuhla siyakwazi ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngekhwalithi enhle kakhulu, zombili uma kukhulunywa ngezingubo uqobo, kanye ne-logo efakwe kubo, imibhalo ebhalwe phansi noma imidwebo. Ngenxa yokuhambisana nezinsizakalo zethu, sinokulawula yonke inqubo yokwenza iphrojekthi eqediwe.
Sisebenzisa wonke amaphrojekthi kusetshenziswa imishini ekhethekile, izinsiza ezisezingeni eliphakeme kakhulu kanye nezinhlobonhlobo zezingubo zokusebenza ezilungiselelwe ezenziwe kanye nezingubo zokuzivikela ezivela kumikhiqizo eyaziwayo, okusho ukuthi iphrojekthi yethu ngayinye izogcotshwa kakhulu.
ukuklama nokwenza Amaphikiseli Aphelele